Fahalalana momba ny faribolana feno: ny mari-pahaizana momba ny fantsom-pandrenesana sy ny Attribution ho an'ny Salesforce | Martech Zone
Fahalalana momba ny faribolana manontolo: Metrika momba ny fantsom-panafody sy Attribution ho an'ny Salesforce
Alatsinainy 11 Febroary 2019 Alatsinainy 11 Febroary 2019 Bonnie Crater
Amin'ny ankamaroan'ny orinasa, ny varotra sy ny varotra dia tsy mandeha amin'ny sehatra milalaovana. Ny asan'ny varotra B2B dia manana rafitra CRM toy ny Salesforce handrefesana ny zava-bita, ao anatin'izany ny metrika ankapobeny amin'ny orinasa sy ny antsipirian'ny valin'ny ekipa sy ny fahombiazan'ny tsirairay. Satria ny rafitra CRM dia miasa ho toy ny rafitry ny firaketana ho an'ny vola miditra amin'ny ankamaroan'ny orinasa, ny ekipa mpivarotra dia manana angona azo itokisana ao amin'ny C-suite.
Ny ekipa mpivarotra dia mampiasa vahaolana martech isan-karazany mba hamerenany fanentanana sy handrefesana izay mitranga eo an-tampon'ny fantsom-pivarotana. Saingy ny ankamaroany tsy afaka mizaha raha hijery izay mitranga raha vao atolotra amin'ny varotra ny firaka. Fahatakarana boribory feno, vahaolana vahaolana amin'ny fitantanana fahombiazana amin'ny marketing izay natsangana 100% amin'ny Salesforce Service Cloud®, mampiaraka ny angona varotra sy marketing, mamorona loharanom-pahalalana tokana.
Ny vokatra Circle Insights dia manome fanazavana mazava momba ny fandraisan'anjaran'ny marketing amin'ny fidiram-bola ary hampiharihary ny fahombiazan'ny ekipa mpivarotra amin'ny alàlan'ny angona varotra sy fivarotana varotra feno. Ny mazava dia vokariny dia ahafahan'ny mpitarika ny varotra sy ny varotra mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa izay mampitombo ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra, hanafaingana ny fantsona sy ny vola miditra ary hitondra ROI ara-barotra avo kokoa.
Fitantanana ny valiny
Ny Circle feno Vahaolana fitantanana valiny manome ny mpampiasa ny angon-drakitra feno momba ny varotra - ao anatin'izany ny fanentanana ny fampielezana Salesforce - mila mitondra fidiram-bola izy ireo. Ny fanoloana takelaka saro-takarina sy ny tatitra tsy feno, tsy feno, ny valin'ny fitantanana dia manome fahitana mazava sy marina izay mampiseho ny valin'ny fahombiazan'ny marketing, mitombo ny fitomboana azo isaina, mahatratra ny Salesforce ROI, mampifanaraka ny varotra sy ny varotra ary manome drafitra azo antoka.
Ny fitantanana valiny dia manome fomba hanarahana ny valin'ny firaka amin'ny dingana rehetra amin'ny fantsona ary manome fomba fijery mihidy ny valiny, manomboka amin'ny loharano ka hatramin'ny valiny. Izy io koa dia manome refy feno fanovana izay mamela ny ekipa marketing sy varotra hamantatra ny fizotran'ny fizotran'ny asa, toy ny teboka tanana izay latsaka ao anaty triatra ny fitarihana, mba hahafahan'izy ireo miara-miasa akaiky kokoa hanamafisana ny fotoana mety.
Ny metrikan'ny fampiroboroboana ny fampielezan-kevitra dia mamantatra tsara izay fampielezan-kevitra mitaona ny fantsom-pandrosoana sy ny vola miditra, ahafahana manatsara ny fifangaroan'ny marketing. Ny metrika fandefasana kaonty sy ny fahaiza-manaony amin'ny alàlan'ny kaonty dia mamela ny mpampiasa hanana fahitana amin'ny fitadiavana kaonty mandritra ny fandrefesana ny fahombiazan'ny kaonty sy ny fizarana.
Ny Circle feno Matchmaker Ny vokatra dia mamela ny mpampiasa hampifandray ireo teboka eo anelanelan'ny fitarihana sy ny kaonty hahafahan'izy ireo mandray anjara sy mandrefy ny hetsika ABM amin'ny fomba mahomby kokoa. Miaraka amin'ny Matchmaker, ny mpampiasa dia afaka mandray anjara mavitrika amin'ny kaonty kendrena raha mitantana am-pahalalana fitarihana miditra, mampifandray ny fitarika tsirairay amin'ny kaonty mahitsy ao anatin'ny paikady varotra sy varotra mifototra amin'ny kaonty.
Mampifandray ireo teboka amin'ny kaonty amin'ny kaonty ao anatin'ny Salesforce, Matchmaker dia mampiasa "fuzzy match" sy mpampifandray mpampiasa drag-and-drop mba hanatsorana ny fampifanarahana ny motera izay mampifanaraka ny motera, manamora ny fanaovana ny tsy hita maso. Izy io koa dia manolotra fitarihana mankany amin'ny tompona amin'ny alàlan'ny lalàna azo ovaina ka alefa araka ny tokony ho izy ny fanararaotana ary arahana, ary ahodina ho valinteny lasibatra ny valiny.
Ny matchmaker dia manamora ihany koa ny mamaritra tsara sy mikendry ny kaonty izay ahazoana ny karama betsaka indrindra, manome fahitana feno amin'ny hetsika ara-tantara sy ny refin'ny fahombiazana ho an'ny kaonty tsirairay. Ny fahaizany mandefitra ny tena manokana dia mahatonga ny fitsipi-pitantanana mifamadika, ny fanovana ary ny fanendrena azy ho mora amin'ny alàlan'ny famelana ireo mpampiasa hisafidy rehefa tokony hitarika automatique ho an'ny fifandraisana ny mpamorona, na hametraha ny fanentanana ho an'ny tompona kaonty mety.
Ny Circle feno Fanentanana fanentanana Ny vokatra dia ahafahan'ny mpampiasa manara-maso ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra ao amin'ny Salesforce hahazoana fomba fijery feno momba ny fomba ahazoan'ny programa marketing vola fidiram-bola. Miaraka amin'ny fanentanana amin'ny fampielezan-kevitra dia mahazo fahitana marina momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra ny mpitarika marketing mba handraisana fanapahan-kevitra mifangaro amin'ny varotra mahomby, ao anatin'izany ny fahitana amin'ny fampielezan-kevitra tsirairay izay misy fiatraikany amin'ny fotoana rehetra.
Azo alaina ao anatin'ny Full Circle Response Management na toy ny vokatra tsy miankina, Campaign Attribution manova ny fomba fanarahan'ny mpivarotra sy fandrefesana ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra ao amin'ny Salesforce miaraka amin'ireo maodelim-panafahana azo namboarina ary koa ireo fitaovana fanaovana maodely any ivelany Manome sary feno ny fomba fanaovana fandaharan'asa marketing amin'ny alàlan'ny funnel manontolo izy io. Izy io koa dia mirakitra ny tatitra momba ny fidiram-bola sy ny fantsom-pandrosoana izay azo zaraina amin'ny karazana fampielezan-kevitra, ny haben'ny mpanjifa sy ny loharanon-karena ary koa ny fomba fijery.
Ny fampielezan-kevitra fampielezan-kevitra dia mamela ny mpampiasa hampiakatra lanja amin'ny alàlan'ny maodely tokana na multi-touch na mamorona modely izay mifanaraka amin'ny tsingerin'ny varotra sy ny tanjon'ny varotra, ao anatin'izany ny fahaizana manamboatra lanjany, mampiditra variables manokana ary mampitaha ny valin'ny maodely. Ny fampielezan-kevitry ny fampielezan-kevitra dia mitahiry ny angon-drakitra fanamarihana marina ao anatin'ny Salesforce, ahafahan'ny mpampiasa misitrika antsipirihany goavam-be amin'ny lafiny rehetra ary mamorona refy fampisehoana matanjaka sy azo antoka.
Ireo mpivarotra tarihan'ny fampisehoana dia mila mandrefy ny fahombiazan'ny marketing nomerika mba hanombanana ny fomba sy ny toerana hampiasana ny dolara marketing. Androany, ny tsindry avy amin'ny doka nomerika, fantsom-piarahamonina ary loharanom-baovao an-tserasera hafa dia mbola tsy mifandray amin'ireo fitarihana ao anatin'ny CRM. Ireo mpivarotra dia mila mampifandray ny nomerika nomerika tsy fantatra anarana an'ny prospect amin'ilay voatondro, mamaly ny fitarihana ao anatin'ny rafitry ny tatitra momba ny vola miditra.
Full Circle Digital Source Tracker manampy an'io fampiasa io eo an-tampon'ny vokatra fandrefesana ny fantsonay, Fitantanana valiny. Miaraka, ireo vokatra ireo dia misambotra fifandraisana an-tserasera sy an-tserasera, ao anatin'izany ny fikitika tsy fantatra anarana, avy amina fantsona, programa ary rafitra maro an'ny mpivarotra, mba handrefesana ny fahombiazan'ny paikadim-barotra sy ny anjara birikiny amin'ny fantsom-pifandraisana sy fidiram-bola.
Momba nyawangin'ny faribolana manontolo
Full Circle Insights dia manolotra vahaolana amin'ny fandrefesana ny varotra sy ny varotra hanatsarana ny fifangaroan'ny varotra orinasa iray ary hitondra fidiram-bola bebe kokoa. Ny orinasa dia manolotra mari-pahaizana maro-mikasika, fantsom-pandrefesana fantsom-pifandraisana feno ary teknolojia fitantanana fitarihana. Namboarina 100% ao amin'ny Salesforce Service Cloud®, ny vokatra Full Circle Insights dia mameno ny vahaolana automatisation marketing.
Full Circle Insights no sehatra ilainao handrefesana ny fiantraikan'ny marketing sy hampitombo ny orinasanao. Nandritra ny sivy taona dia nandany sehatra feno izahay izay manara-maso sy mandrefy ny fampielezan-kevitra rehetra, ny programa, ny hetsika ary ny fantsona amin'ny toerana iray. Ny sehatray dia mameno ny antontam-barotra misy anao ankehitriny ary mitondra ny angon-drakitra avy amin'ireo rafi-barotra rehetra ao aminao mankany CRM amin'ny fomba mahazatra ho an'ny famakafakana cornel feno. Ary ny tena zava-dehibe dia manome anao fahitana sy fitaovana azo ampiasaina ny sehatra anay hanatsarana ny fampielezan-kevitra sy fandaharana mba hisy akony lehibe indrindra amin'ny orinasanao.
Manaova fandaharana Demo iray manontolo momba ny faribolana
Tags: abmfitantanana miorina amin'ny kaontyDigital Source Trackerfahitana faribolana fenofampifangaroana manjavozavo
Bonnie Crater no filoha & CEO an'ny Fahatakarana boribory feno. Talohan'ny nidirany tao amin'ny Full Circle Insights, Bonnie Crater dia filoha lefitry ny marketing ho an'ny VoiceObjects and Realization. Bonnie koa dia nitana andraikitra tamin'ny filoha lefitra ary filoha lefitra zokiny tao amin'ny Genesys, Netscape, Network Computer Inc., salesforce.com, ary Stratify. Ben'ny tanàna veteranan'ny Oracle Corporation folo taona sy ireo sampana samihafa ao aminy, i Bonnie dia filoha lefitra, Compaq Products Division ary filoha lefitra, Workgroup Products Division.
Feedier: Sehatra fanehoan-kevitra atosiky ny valisoa
Manangana lisitry ny mailaka ho an'ny marketing amin'ny mailaka